सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमाथि ठूला अस्पतालको खेलवाड – Halkaro
सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमाथि ठूला अस्पतालको खेलवाड
प्रकाशित मिति : २०७४, ३१ असार शनिबार
काठमाडौं । उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने उपकरण ३० वर्षभन्दा पुराना छन् । त्यस्ता उपकरणको आयु औसत दुईदेखि पाँच वर्षको हुन्छ । वीर, टिचिङ, सिभिललगायतका अस्पतालले वर्षौं पुराना उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् ।
‘दुईदेखि पाँच वर्ष मात्रै औसत आयु हुने भए पनि सरकारी अस्पतालमा पुराना उपकरण प्रयोगमा छन्,’ सिभिल अस्पतालका निर्देशक आरपी चौधरीले भने ।
अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण (टिचिङ) अस्पताल महाराजगन्जमा पनि पुराना उपकरण प्रयोगमा आइरहेका छन् । अस्पतालका मेन्टिनेन्स शाखाका इन्जिनियर अमितकुमार चौधरीले स्थापनादेखिका उपकरणबाटै बिरामीको स्वास्थ्य जाँच भइरहेको बताए । ‘पुराना मेसिनबाटै हामीले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
इन्जिनियर चौधरीले निश्चित आयुभन्दा बढी समय चलेका उपकरणको क्षमतामा कमी आउने भएकाले यस्ता मेसिनले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए ।
सबैभन्दा पुराना उपकरण टिचिङ अस्पतालमा रहेका छन् । यस्ता उपकरणलाई सबै अस्पतालले विस्थापन गरी अत्याधुनिक उपकरण जडान गर्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ । टिचिङ अस्पतालमा २५ वर्षदेखि अटो क्लेभ मेसिन सञ्चालनमा रहेको छ । यसलाई वर्षौँवर्षसम्म सञ्चालनमा ल्याउनु उपयुक्त नभएको प्रा.डा. लोकविक्रम थापा बताउँछन् ।
← रूकुमेलीको अनुभवः नारामा गाँउगाँउमा सिंहदरबार, व्यवहारमा भने उल्टो
प्रदेश नं. २ मा विजयी हुने माअोवादी रणनीति →
दोधारमा प्रधानमन्त्री, चीन जानेकी मोदीलार्इ स्वागत गर्ने
अब बालिका बलात्कार गर्नेलार्इ मृत्युदण्ड
झस्किएका प्रचण्डको लेलिन जयन्तीमा अायो यस्तो विज्ञप्ति
निःशूल्क क्यान्सर परीक्षण
कृषि यान्त्रिकरणमा जोड